Konton Qof Oo ku Dhimatay & Boqolaal kale Oo La’yahay Kdib Musiibo ka Dhacday Gobolka California.(Sawirro) | Awdalmedia.com
Mon 12 November 2018.
Sida ay masuuliyiintu sheegeen Waxaa sare u sii kacday dadka ku dhintay dab ka kacaya gobolka California ee dalka Maraykanka iyadoo gaartay 48 ruux, in ka badan 200 kalena wali la la’yahay.
Lix ruux oo dheeri ah ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen waqooyiga gobolka iyada oo dadka aagaas ku dhintay ka dhigaysa 29 ruux.
Dabku wuxuu la waxyeelo noqday midkii u darnaa ee California 1933 kaas oo ku dhuftay Los Angeles.
Dhanka koonfureedna dabku dad ayuu ku laayay wuxuuna gubay goobo loo tamashle tago oo ay ka mid tahay Malibu.
Dad lagu qiyaasay 250,000 ayaa lagu qasbay in ay isaga tagaan guryahooda si ay dababka waawayn uga badbaadaan.
Governatooraha gobolka California Jerry Brown ayaa Madaxweyne Trump ka dalbaday inuu ku dhawaaqo inay masiibo wayn jirto, arrintaas ayaana u sahli karta dhaqaale degdeg ah oo dawladda dhexe soo fasaxdo si xaaladda wax loogaga qabto.
Dalabkan ayaa imaanaya maalin uun ka dib markii uu madaxweynuhu ku goodiyay inuu dhaqaalaha ka jari doono gobolka California, isagoo dabka ku eedeeyay wax uu ku tilmaamay qaab xun oo loo maareeyo Kaymaha gobolkaas.